Bit By Bit - Intshayelelo - 1.4.2 Indlela Elula phezu ukuntsonkotha
Uphando Complex akanakuze unokusiqinisekisa into emangalisayo. Ukuba Wazazi ukutshintsha iingqondo, ngoko uphando zakho mazibe lula.
uphando loLuntu kweminyaka yedijithali unxulunyaniswa ukuntsokotha, ezifana algorithms ezintle kunye abachubekileyo computing. Lilishwa ke elo kuba uphando iqinisekisayo zentlalo isoloko ilula. Ukuze icace, uphando elula akufani njengoko uphando lula. Enyanisweni, oku kudla ngokuba nzima kakhulu ukwenza uphando elula.
Esona sizathu sibalulekileyo bakhetha uphando elula kukuba yeyona ndlela kuphela ukudala iyakholeleka iziphumo ezingalindelekanga. Ngokomzekelo, cinga ukuba baye baqhuba nje uphando usebenzisa lukwayindlela zintsonkothe. Ukuba iziphumo zakho utshatise ithemba lakho, emva koko uya mhlawumbi akakholeki. Kodwa ke, ukuba iziphumo zakho zahlukile koko kulindeleke, ezimbini iinketho: ukwamkela iziphumo ezingalindelekanga okanye ngokuthandabuza indlela entsonkothileyo. uqikelelo lwam ukuba lukhulu kusenokwenzeka ukuba bathandabuze indlela entsonkothileyo. Oku kwenza ngengqiqo egqibeleleyo, kodwa kuthetha ukuba olunzima kakhulu indlela, kuyanqaba ngayo ukuvelisa iziphumo ezingalindelekanga ukuba okunene nikholwe. Ngaxa lithile, iindlela babe entsonkothileyo ukuze iziphumo kuphela ukuba unokukholwa abo ezithiywe nina kulindelekileyo. Ngelo xesha, uphando iphelelwe yinto ebaluleke kakhulu: uphando kufuneka bakwazi ukutshintsha ingqondo yakho.
Ingxaki ukuba ndiye kuchazwa nje ngonaphakade ngakumbi xa uqala uzama ukutshintsha ingqondo yomnye umntu. Khawube wokwenza iqhekeza zintsonkothe ​​wophando aneziphumo engalindelekanga komnye umntu. omnye umntu lowo hayi iinyanga wachitha ukubhala ikhowudi yakho ukusebenza data yakho ukuze xa sijamelene ukhetho yokwamkela japan engalindelekanga okanye bethingaza indlela ezintsonkothileyo, phantse ngokuqinisekileyo uza ngokuthandabuza indlela entsonkothileyo. Ukuba omkhathaleleyo ingakubonisa omnye umntu ukutshintsha ingqondo zabo, emva koko uphando yakho ifuna ukuba elula.
Simple uphando uvela kufanelekile yendalo phakathi umbuzo neenkcukacha; ngamanye amazwi, uyilo uphando elungileyo. uyilo uphando amahlwempu, kunjalo, kukhokelela yobumbaxa amabi avela ndisolulela data yakho umbuzo abaza asingqinelani kakuhle. Le ncwadi ijolise iindlela ezimbini ukwenza kufanelekile yendalo phakathi umbuzo kunye nedata. Okokuqala, le ncwadi kuza kukunceda ukuba ukubuza imibuzo esengqiqweni lwe data. Okwesibini, le ncwadi kuza kukunceda ukuba ukuqokelela idata unelungelo ukuphendula umbuzo wakho.